Kaspersky mobile antivirus — MYSTERY ZILLION
Kaspersky mobile antivirus software ကို ဘယ်လို crack လုပ်ရမလဲ ဘယ်က ရနိုင်မလဲခင်ဗျာ... ပေးကြပါဦး.. ဒီလင့်ခ်မှာ trial version ပဲပေးထားလို့.. :106::106::106:
mobile ဆိုတော့ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိဘူး ထပ်ရေးလိုက်တာပါ..နေရာမှားသွားရင်ရွှေ့ပေးကြပါ...:D:D:D ကျတော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရဲ့ Nokia Xpressmusic 5800 လေးမှာ သီချင်းတွေ ပျောက်ကုန်ပါတယ်.... ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင် မြင်နေရတယ်ဖွင့်လို့လဲရတယ်ဗျာ... ဗိုင်းရပ်လားတော့မသိဘူး ပြီးတော့ သူ့ FW မှာက အင်္ဂလိပ်နဲ့ယိုးဒယားပဲပါတယ် အဲ့ဒါကို တရုတ်စာလေးပါထပ် ထဲ့ချင်တယ်တဲ့ အဲ့ဒါကြီးလာပေးသွားလို့... စျေးကလဲမသေးတော့ ကျတော် မကလိရဲလို့... :D:D ကြုံဖူးသူများနဲ့ FW ပြောင်းဖူးသူများရှိရင် ကူညီကြပါဦးဗျာ.... မှားသွားရင် အချောင်ရော်နေရမှာစိုးလို့ပါ...:D:D:D
I thinks that loss of songs is because of file system. Please be sure file system and format. Good Luck!
Please help me! Please give me activation keys.....
ကျတော်တို့ mz က ခရက်ကာ ကိုယောင်စိန်ဆီ pm ပို့ကြည့်ပါလား.... ကပ်စပါ ခရက်မှာတော့ ကိုယောင်စိန်ကအရှာတော်တယ်.... ခရက်ကာယောင်ကို လက်တို့ပီးတော့မေးကြည့်ပါလား...:d:d:d
ကျွန်တော်တွေ့ထားတာတော့ရှိတယ် S60v3, S60v5, SymbianOS9.x တွေကို support လုပ်တယ်လို့ ရေးထားတယ် စမ်းကြည့်ချင်ရင်စမ်းကြည့်ပေါ့ ရတယ်မရဘူးတော့ပြန်ပြောပါဦးနော် ကက်စပါမိုဘိုင်းကို smart phone ၀ယ်နိုင်သေးလို့စမ်းဘူးသေးဘူးဗျ :D:D
It's can't to be use. file extention must be sis. It's easy if i get how to use guide. \_
mobile ဆိုတော့.. mobile ဆိုတော့ဆိုင်လားမဆိုင်လားမသိဘူး ထပ်ရေးလိုက်တာပါ..နေရာမှားသွားရင်ရွှေ့ပေးကြပါ...:d:d :d ကျတော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရဲ့ Nokia Xpressmusic 5800 လေးမှာ သီချင်းတွေ ပျောက်ကုန်ပါတယ်.... ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင် မြင်နေရတယ်ဖွင့်လို့လဲရတယ်ဗျာ... ဗိုင်းရပ်လားတော့မသိဘူး ပြီးတော့ သူ့ FW မှာက အင်္ဂလိပ်နဲ့ယိုးဒယားပဲပါတယ် အဲ့ဒါကို တရုတ်စာလေးပါထပ် ထဲ့ချင်တယ်တဲ့ အဲ့ဒါကြီးလာပေးသွားလို့... စျေးကလဲမသေးတော့ ကျတော် မကလိရဲလို့... :d:d:d ကြုံဖူးသူများနဲ့ FW ပြောင်းဖူးသူများရှိရင် ကူညီကြပါဦးဗျာ.... မှားသွားရင် အချောင်ရော်နေရမှာစိုးလို့ပါ...
အကိုရေ အဲဒါ တရုတ်လမ်းကွေ့ချ် ပါတဲ့ ဗားရှင်းပြန်ပြောင်းမှ ရမှာပါ:) အဲလိုပြောင်းဖို့က သူ့ ဗားရှင်းထက် မြင့်တဲ့ တရုတ်လမ်းကွေ့ချ် ပါတဲ့ ဖလက်ချ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီးမှ ဖလက်ရေးတဲ့ ဘောက်စ် နဲ့ ရေးမှ ရမှာပါအကို :6: